ITALY VS SWEDEN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
(Milano) 13 Nof 2017 – Xulka Talyaaniga ayaa caawa dalka Sweden ku wajahaya kulan dhali ama dhimo ah kaasoo ay haddii ay badin waayaan ay markii ugu horreeysey tan iyo 1958-kii uga harayaan KA2018.
Dhanka Italy: Xulka Talyaaniga ayaa ku noqonaya isla shaxdii uu kulankii hore ku khasaaray ee 3-5-2 iyadoo daaqadda laga xooray laba shax oo kala ah 4-2-4 ama 3-4-3 oo mar u muuqatay mid la hubo.
Seddexleeydii BBC ee kulankii hore dheelaysay ayaa weli safan, balse khadka dhexe waxaa ku cusub Florenzi iyo Jorginho kuwaasoo bedelaya Verratti iyo De Rossi. Gabbiadini ayaa isna ku cusub waaxda weerarka. Waxaa weli kaydka kululaynaya Insigne.
Dhanka Sweden: Macallin Andersson ayaa safaya 9/11 ka mid ah intii dheeshey ciyaartii guuleed ee hore taasoo ka bilaabanaysa joogga dhanka weerarka ee Berg-Toivonen. Daafaca dadaba midig waxaa ganaax kasoo laabanaya Lustig kaasoo ay u badan tahay inuu qaato booska Krafth.
12 DONNARUMMA, 22 PERIN, 13 ASTORI, 2 RUGANI, 21 ZAPPACOSTA, 8 EL SHAARAWY, 10 INSIGNE, 5 GAGLIARDINI, 20 BERNARDESCHI, 17 EDER, 16 DE ROSSI, 9 BELOTTI
12 JOHNSSON, 23 NORDFELDT, 16 KRAFTH, 5 OLSSON, 11 GUIDETTI, 14 HELANDER, 15 SVENSSON, 18 JANSSON, 19 ROHDEN, 21 THELIN, 22 SEMA
Julian Draxler oo beeniyay inuu badal u noqonayo Ribery